Mask တပ်ရမှာ ရှက်ကြတယ်၊ ဘာမှန်း မသိ တဲ့ အခြေအနေတစ်ခု မှာ ကြိုတင်ကာကွယ်တာ အကောင်း ဆုံးဆိုတာ မသိတဲ့သူများ – Shwewiki.com
နိုင်ငံတကာမှာ (အထူးသဖြင့် အာရှနိုင်ငံတွေမှာ) ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် အခြေအနေက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ဆိုးဆိုးလာတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလဲ ဘာမှန်းမသိရသေးတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ အဲ့တော့ တစ်နေ့တစ်နေ့ YBS တိုးစီးနေရတဲ့ ကိုယ်က ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး Mask ကို ကားစီးတဲ့အချိန်တိုင်းတက်တော့တာပဲ…
ကားစီးတဲ့အချိန် ကိုယ်က နားကြပ်တပ် သီချင်းနားထောင်နေတော့ ဘယ်သူတွေ ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုမြင်နေ ထင်နေလဲ သတိမထားမိဘူး။ ဒီနေ့ ရုံးအပြန် ဆင်းရမယ့် မှတ်တိုင်ရောက်တော့ နားကြပ်ဖြုတ်ပြီး ဆင်းရမယ့် အပေါက်နားမှာ ဘဲလ်တီးရင်း ရပ်နေတာပေါ့။ အဲ့အချိန် အပေါက်နားမှာ ထိုင်တဲ့ ဦးလေးတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီး တစ်ယောက်ထဲ ပွစိပွစိနဲ့ စကားတွေပြောနေတယ်။ ကားမောင်းနေတဲ့ အသံနဲ့ ကိုယ်လဲ သူပြောတာ မကြားဘူးပေါ့။ မှတ်တိုင်လဲ ရောက်ရော ကားကရပ်ပြီး တံခါးဖွင့်လို့ ဆင်းမယ့်အချိန်မှာ သူပြောတဲ့ စကားကို ကိုယ်ကလဲ ကြားဖြစ်အောင် ကြားသွားသေးတယ်။ “သေ‌မှာတော့ ကြောက်နေကြတယ်” တဲ့!
အံ့ဩပါပေ့တကယ်ပါပဲ! ဘာမှန်းမသိတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာ ကြိုတင်ကာကွယ်တာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဆိုတာ မသိဘူးလား? ကိုယ့်ဆီလဲ အကူးမခံနိုင်ကြသလို ကိုယ့်ဆီကနေလဲ ဘယ်သူ့ဆီမှ မကူးတာ အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးလား? ကောင်းသော အမူအကျင့်ကို အတုယူပြီး ကျင့်သုံးသင့်တဲ့အချိန်မှာ ကဲ့ရဲ့ ရှုံ့ချတဲ့ ဒီနိုင်ငံက လူတွေကို ဖြည့်တွေးပေးချင်စိတ်ကို မရှိအောင် စိတ်ကုန်သွားတယ်!
ကားပေါ်က ဆင်းရမှာမို့ ဒီတိုင်းဆင်းလာခဲ့တယ်။ ဘေးနားမှာရှိနေသေးရင်တော့ ပြန်ပြောမိမလားမသိဘူး။ သို့ပေသိ ဦးဏှောက်ကို အပြစ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဆိုတဲ့အတွက်ပဲ အသုံးပြုနေတဲ့လူနဲ့ကတော့ ကိုယ်သွားပြောလဲ ကျွဲပါးစောင်းတီးတာနဲ့ ဘာမှကွာနေမှာမဟုတ်ဘူး… ကျေးဇူးပြုပြီး အဲ့လိုသေးသိမ်တဲ့ မစင်အတွေးတွေ ထုတ်ထားကြပါတော့!!
မြန်မာလူမျိုးတွေက Mask တပ်ရမှာ ရှက်ကြတယ်.. လူတွေဝိုင်းကြည့်မှာကြောက်ကြတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးတွေက နေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း Mask တပ်မှ လုံခြုံတယ်ခံစားတယ်.. Mask မတပ်ထားပဲ ချောင်းဆိုးရမှာ ရှက်ကြတယ်.. ​Mask မတပ်ထားပဲ ချောင်းဆိုးနှာစီးရင် လူတွေဝိုင်းကြည့်တယ်…
ကျန်းမာရေးအသိ အဲ့မှာကွာတာပဲ.. ဖြစ်ပီဟေ့ဆို.. ကူးလိုက်မှန်းတောင် သိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး.. “ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုပြီးကောင်းတယ်” ဆိုတာကိုလဲ လက်ခံကြပါတော့… Please…
Thein Thant Thant Zin
နိုငျငံတကာမှာ (အထူးသဖွငျ့ အာရှနိုငျငံတှမှော) ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈ အခွအေနကေ တဈနထေ့ကျတဈနဆေို့းဆိုးလာတယျ။ ကိုယျ့နိုငျငံမှာလဲ ဘာမှနျးမသိရသေးတဲ့ အခွအေနတေဈခုဖွဈနတေယျ။ အဲ့တော့ တဈနတေ့ဈနေ့ YBS တိုးစီးနရေတဲ့ ကိုယျက ကွိုတငျကာကှယျဖို့ ဆုံးဖွတျပွီး Mask ကို ကားစီးတဲ့အခြိနျတိုငျးတကျတော့တာပဲ…
ကားစီးတဲ့အခြိနျ ကိုယျက နားကွပျတပျ သီခငျြးနားထောငျနတေော့ ဘယျသူတှေ ကိုယျ့ကို ဘယျလိုမွငျနေ ထငျနလေဲ သတိမထားမိဘူး။ ဒီနေ့ ရုံးအပွနျ ဆငျးရမယျ့ မှတျတိုငျရောကျတော့ နားကွပျဖွုတျပွီး ဆငျးရမယျ့ အပေါကျနားမှာ ဘဲလျတီးရငျး ရပျနတောပေါ့။ အဲ့အခြိနျ အပေါကျနားမှာ ထိုငျတဲ့ ဦးလေးတဈယောကျက ကိုယျ့ကိုကွညျ့ပွီး တဈယောကျထဲ ပှစိပှစိနဲ့ စကားတှပွေောနတေယျ။ ကားမောငျးနတေဲ့ အသံနဲ့ ကိုယျလဲ သူပွောတာ မကွားဘူးပေါ့။ မှတျတိုငျလဲ ရောကျရော ကားကရပျပွီး တံခါးဖှငျ့လို့ ဆငျးမယျ့အခြိနျမှာ သူပွောတဲ့ စကားကို ကိုယျကလဲ ကွားဖွဈအောငျ ကွားသှားသေးတယျ။ “သေ‌မှာတော့ ကွောကျနကွေတယျ” တဲ့!
အံ့ဩပါပတေ့ကယျပါပဲ! ဘာမှနျးမသိတဲ့ အခွအေနတေဈခုမှာ ကွိုတငျကာကှယျတာ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးဆိုတာ မသိဘူးလား? ကိုယျ့ဆီလဲ အကူးမခံနိုငျကွသလို ကိုယျ့ဆီကနလေဲ ဘယျသူ့ဆီမှ မကူးတာ အကောငျးဆုံးမဟုတျဘူးလား? ကောငျးသော အမူအကငျြ့ကို အတုယူပွီး ကငျြ့သုံးသငျ့တဲ့အခြိနျမှာ ကဲ့ရဲ့ ရှုံ့ခတြဲ့ ဒီနိုငျငံက လူတှကေို ဖွညျ့တှေးပေးခငျြစိတျကို မရှိအောငျ စိတျကုနျသှားတယျ!
ကားပျေါက ဆငျးရမှာမို့ ဒီတိုငျးဆငျးလာခဲ့တယျ။ ဘေးနားမှာရှိနသေေးရငျတော့ ပွနျပွောမိမလားမသိဘူး။ သို့ပသေိ ဦးဏှောကျကို အပွဈဘယျလိုပွောရမလဲ ဆိုတဲ့အတှကျပဲ အသုံးပွုနတေဲ့လူနဲ့ကတော့ ကိုယျသှားပွောလဲ ကြှဲပါးစောငျးတီးတာနဲ့ ဘာမှကှာနမှောမဟုတျဘူး… ကြေးဇူးပွုပွီး အဲ့လိုသေးသိမျတဲ့ မစငျအတှေးတှေ ထုတျထားကွပါတော့!!
မွနျမာလူမြိုးတှကေ Mask တပျရမှာ ရှကျကွတယျ.. လူတှဝေိုငျးကွညျ့မှာကွောကျကွတယျ။ ဂပြနျလူမြိုးတှကေ နကေောငျးကောငျးမကောငျးကောငျး Mask တပျမှ လုံခွုံတယျခံစားတယျ.. Mask မတပျထားပဲ ခြောငျးဆိုးရမှာ ရှကျကွတယျ.. ​Mask မတပျထားပဲ ခြောငျးဆိုးနှာစီးရငျ လူတှဝေိုငျးကွညျ့တယျ…
ကနျြးမာရေးအသိ အဲ့မှာကှာတာပဲ.. ဖွဈပီဟဆေို့.. ကူးလိုကျမှနျးတောငျ သိလိုကျမှာမဟုတျဘူး.. “ကွိုတငျကာကှယျခွငျးက ကုသခွငျးထကျ ပိုပွီးကောငျးတယျ” ဆိုတာကိုလဲ လကျခံကွပါတော့… Please…